Shinlay: Cultural Shock
Posted by Shinlay at 09:35
Nan Thandar said...
Thanks for sharing your views about Germany. I got lots of knowledge about German through your post. I will visit your blog again.
မင်းညို၊ မဟာဆန် said...
ဂျာမနီကို ရောက်တာ ၉ နှစ်ရှိသွားပြီလား...။ တစ်ချို့  ဂျာမန်တွေကတော့ စပ်စုတာ မကြိုက်ကြဘူး..။ သူတို့ကတော့ စပ်စုချင် စပ်စုမှာပေါ့..။လူတစ်ကိုယ် တစ်မျိုးစီပေါ့လေ..။ ဂျာမနီမှာ နေထိုင်ဖို့ အတွက်ကတော့ ဂျာမန်စကားနဲ့ ကြိုးစားပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးထင်ပါတယ်..။ အဲ..ကျွန်တော်တော့ ဂျာမန်လို မတတ်ဘူး အဆင့်မှာ ရှိပါတယ်..။ ဂျာမနီမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာ အတော်များလာပါပြီ..။တချို့ အမြဲတန်း နေဖို့လာကြသူတွေရော ၊ ပညာရေးအတွက် ခဏလာကြသူတွေရောအတော်စုံပါတယ်..။ ဒီလိုပို့စ်လေးတွေဖတ်ရတာ ကြိုက်တယ်..။အတွေ့အကြုံကို ပေးထားတာဆိုတော့ တန်ဖိုးရှိတာကိုး..။ အားပေးလျှက်..။
5 July 2009 at 05:49
ရှင်လေးေ၇ ... ပို့စ်အဟောင်းတွေ ၇ှာဖတ်သွားပါတယ်။ ဒီပို့စ်လေးကနေ မသိဘူးမကြားဘူးတဲ့ ဂျာမန်လူမျိုးတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်အနည်းငယ်ကို သိသွားပါတယ်။ ကျေးဇူး
really nice to know the culture and habit of German. thanks for sharing ur experience.